10 Guryaha Isteek ee ugu Fiican Adduunka | Save A tareenka
Home > Talooyin ku Socda > 10 Guryaha Isteek ee ugu Fiican Adduunka
Markaad maqasho erayga steakhouse, isla markiiba waxaad ka fekereysaa Mareykanka ama Yurub midkood. Si kastaba ha ahaatee, kuwani maahan meelaha kaliya ee xoolo lagu dhaqdo laguna cuno hilib jireed. Wagyu iyo Kobe, kuwaas oo loo arko inay yihiin hilibka lo'da ugu fiican adduunka, asal ahaan ka soo jeeda Japan. Waxaa intaa dheer, meelaha sida Portugal iyo Argentina ay mudan yihiin in si gaar ah loo xuso.
Lo'da cawska laga daaqay ee gobol gaar ah waxay yeelan doontaa dhadhan fiican oo u gaar ah gobolkaas gaarka ah. Isagoo sheegay in, cut a casiir leh steak waa ikhtiyaarka tag-in aqlabiyadda hilibka jecel. Waxaan soo saarnay liiskan 10 Guryaha Isteek ee ugu Fiican Adduunka, kaas oo ah inuu ku yaal liiska baaldi haddii hilibku yahay mid ka mid ah cuntooyinka aad ugu jeceshahay.
Ka mid ah guryaha ugufiican adduunka, Goodman asal ahaan wuxuu ka yimid New York. Goodman wuxuu furay laanta London 2008, iyo rukhsad bixinta ayaa ku ballaarisay saddex meelood oo dheeraad ah tan iyo markaas.
Makhaayada waxaa la gudoonsiiyay Michelin Star waxaana jecel macaamiishiisa sababtoo ah maqaarkeeda iyo dhawaaqa alwaaxa oo u ekeysiinaya astaamaha New York. Macaamiisha waxay helayaan ikhtiyaarka ay ka doortaan Spain, UK, ama jarista Mareykanka. Makhaayadu waxay ku da 'weyn tahay hilibkeeda goobta waxayna ku faani doontaa isha feeraha.
Mancy’s Steakhouse ee magaalada Toledo, Ohio, waa mid ka mid ah xarumaha halyeeyada ah. Steakhouse waxaa laga aasaasay gudaha 1921 iyo, haddii dadka deegaanka la aamino, sii wado in la buuxiyo ilaa maalintii 1, xitaa maalmaha shaqada. Waxaa lagula talinayaa inaad iska hubiso Toledo radar weather ka hor intaadan u bixin halkaas maadaama laga yaabo inaad sugto xoogaa inaad soo gasho.
Waxaa ugufiican in la xuso maalin ay cimilada Toledo fiicantahay, iyo sugitaanka banaanka ayaa kaliya kordhin doonta rajada waxa adiga kugu jira gudaha, kuma qasbi doono inaad dib u gurato meel kale. Manak’s steakhouse waxay u adeegtaa USDA Certified Angus, iyo Angus Prime Steaks oo da 'ah isla markaana lagu gowracay goobta. Xeerarka ayaa sidoo kale ku dhaaranaya cuntada badda ee halkan lagu adeegto, gaar ahaan Alaska King Crab iyo aargoosatada Australia.
3. XIDH Waxaa qoray Wolfgang Puck, Singapore
Wolfgang Puck uma baahna hordhac. Cunto kariye caan ah oo reer Mareykan ah oo u dhashay Austrian iyo makhaayad ayaa furay makhaayaddiisii ​​ugu horreysay ee Aasiya la yiraahdo CUT ee Marina Bay Sands, Singapore, in 2010. Tan iyo markii boqortooyadii CUT ay adduunka oo dhan ka ballaartay, laakiin laanta Singapore ayaa sii ahaanaysa tan ugu fiican.
Macaamiisha ayaa ku raaxeysan kara Kobe heer caalami ah, 300-maalin hadhuudh-quudin Angus, ama A5 Wagyu. Takhasuska aasaaskani waa soosaarida suugada gudaha iyo ururinta khamri ballaadhan oo si fiican ugu habboon cutub kasta oo caan ah oo steak ah.
Aragawa oo ku taal Tokyo waa mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan steakhouses ee adduunka. Makhaayada ay caanka ku tahay Michelin ayaa caan ku ah cunto kariye – Yamada Jiro, kaasoo u adeega kaliya hilibka Kobe ee ugu fiican adduunka.
USP-ka makhaayadani waa inay kor u qaaddo lo'deeda oo ah lo'da Tajima oo nadiif ah tan iyo markii la furay 1967. Xakamaynta tayada wanaagsan iyo xulashada ugu wanaagsan ee xirmada la bixinayo ayaa ka dhigaysa Aragawa xulasho raaxo oo raaxo leh.
Ganacsigan ay maamusho qoysku wuxuu ku faanaa USDA shahaadada koowaad ee hilibka lo'da. Waxay ka soo dhoofsadaan hilibka ugu fiican bartamaha-galbeed waxayna ku qallalaan da'da dhismaha. Makhaayaddan ay caanka ku tahay Michelin sidoo kale waa ta ugu da'da weyn, isagoo lagu aasaasay 1887.
Meeshu waxaa loo tixgeliyaa inay tahay astaanta muuqaalka cuntada ee Magaalada New York iyo munaasabad marin u ah dad badan. Hilibka 'Porterhouse', qallalan oo ku yaal dhismaha 28 maalmood, waa saxan lagu taliyay oo leh dhinac baradhada Jarmalka la shiilay iyo suugada guriga dhexdiisa ah.
Waxaa wada Paolo Mugnai oo ku sugan Tuscany, Antica Osteria ayaa albaabada loo furay 2007 oo wuxuu leeyahay rustic ah, adduun-duugga ah ee waayo-aragnimada qadada sare leh. Makhaayada waxaa loo yaqaanaa Bistecca Alla Fiorentina, hilib Talyaani ah oo ka samaysan hilib lo 'ama qaalin iyo saxan muhiim u ah cunnada Tuscan.
Muhiimadda ugu weyn ee waayo-aragnimada cunnada ee Antica Osteria waa kuugga diyaarinaya hilibka lafta ku jira hortaada adiga oo aan waxba isticmaalin saliida saytuunka Tuscan iyo xoogaa milix badda ah.
7. Baarka Gibsons & Steakhouse, Chicago
Magaalada Chicago, Gibsons Bar iyo Steakhouse waxay ku faanaan inay noqdaan silsiladii makhaayaddii ugu horreysay ee dalka ka jirta ee iyagu iska leh Shahaadada USDA loogu talagalay Prime Angus lo'da.
Makhaayada ayaa caan ku ah lo'da Black Angus, hadhuudh lagu quudiyay 120 maalmood ka dibna da'da-qalalan ee dhismaha loogu talagalay 40 maalmood. Dadka ku nool halkan Chicago waxay ku dhaartaan WR's Chicago hilib la jaray, baradhada laba-dubay dhinaca, iyo Gibsons -ka caanka ah ee cusbada leh.
Grillhouse-ka ku yaal magaalada Johannesburg waxaa loo tixgeliyaa guriga ugu wanaagsan ee lagu iibiyo xoolaha ee Koonfur Afrika. Guriga nooca New York loo yaqaan ee loo yaqaan 'grill house grill' ayaa caan ku ah u adeegida fillet udgoon-heer caalami ah iyo feeraha aadka u wanaagsan oo ay weheliyaan malt-ka hal-abuurka ah raagay degaanka.
Meeshani waxay caan ku tahay feeraha raagay ee duban, kaas oo lagu dubay olol hooseeya meelkasta oo udhaxeysa sagaal ilaa 12 saacadood. Takhasusyada kale ee goobta waxaa ka mid ah T-laf iyo barar. Waxa ka dhigaya makhaayaddan mid qiimo gaar ah leh hilibka lo'da ee Koonfur Afrika iyo shaqaale adeeg aad u fiican.
Sida aan ku xusnay hordhaca, Argentina waa mid ka mid ah gobollada ugu wanaagsan ee soo saara hilib lo'aad oo casiir leh oo leh dhadhan u gaar ah gobolka. La Cabana waa mid ka mid ah maqaayadaha loogu dabaal-degga badan yahay Buenos Aires, oo ku yaal meesha ugu dhow magaalada.
Makhaayadu waxay u adeegtaa hilib quraac ah, qado, iyo casho. Talooyinka fudud qaarkood waxaa ka mid ah hilibkooda 'T-bone steak', hilibka lo'da, feeraha koowaad, iyo feeraha dhuuban ee khafiifka ah. Makhaayada waxay kaloo bixisaa aruurin ballaaran oo khamri maxalli ah si ay ula socoto hilibkaaga.
El Capricho oo ku yaal Leon, Spain, waxaa loo arkaa inay yihiin xajka dadka jecel hilibka maadaama ay gebi ahaanba ka baxsan tahay waddooyinka la garaaco, ka fog kuwa ugu caansan soo jiidashada dalxiiska ee Spain. Waxay ku taal Leon, El Capricho waxaa maamula Jose Gordon, makhaayad, cunto kariye, iyo beeraley.
Makhaayada ayaa caan ku ah hilibkeeda oo laga dhaqdo lo'da iyo lo'da duugga ah ee ka soo jeeda jasiiradda Iberia inta u dhexeysa da'da toddobo ilaa saddex iyo toban sano. Mar la qalay, lo'da waa u qalalan-da ' 160 maalmood, taas oo aad uga saraysa heerka caadiga ah. Macaamiisha ayaa ku raaxeysan kara lafaha T-lafaha, soo qor, ama sirloin loo dubay si kaamil ah dabka furan, oo ku lammaansan hal koob oo khamri maxalli ah oo heer sare ah.
Tani waxay soo gabagabeyneysaa liiskayaga adduunka ugu sarreeya 10 guryaha ugu fiican. Hadaad isku tixgeliso naftaada steak lover, mid kasta oo ka mid ah kuwan waa inuu ku jiraa liiska baaldigaaga.
halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonaa inaan kaa caawino qorsheynta safarka cuntada ee 10 Guryaha Isteek ee ugu Fiican Adduunka.
Miyaad rabtaa inaad ku dhejiso dhejiskayaga baloogga "10 Steakhouses Best in the World" bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fbest-steakhouses-world%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Guryaha Isteek ee ugu Fiican BestSteakhousesWaxa aduunka oo dhan Hilibley Cunto Hilib Isteek Steakhouse